Kooxda Bayern Munich oo ku guuleysatay horyaalnimada Jarmalka ee Bundesliga… – Hagaag.com
Kooxda Bayern Munich oo ku guuleysatay horyaalnimada Jarmalka ee Bundesliga…
Posted on 17 Juunyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Bayern Munich ayaa ku guuleysatay horyaalnimada Jarmalka ee Bundesliga markii sideedaad oo isku xigta iyo markii sodonaad ee taariikhda tartankan, ka dib markii ay ka badiyeen kooxda martida loo ahaa ee Werder Bremen Talaadadii wareega 32aad ee tartanka.
Dib ugu laabashada heerka labaad ee Paderborn ayaa la xaqiijiyay ka dib markii ay guuldarro kala kulantay FC Union Berlin oo heshay gool nadiif ah, halka Borussia Monchengladbach ay kor u kacday rajadii ay ka laheyd ka qeyb galka Champions League iyadoo ku garaacday Wolfsburg seddex gool oo nadiif ah, sidoo kale waxaa wada ciyaaray kooxaha Freiburg iyo Hertha Berlin oo ku dhamaatay 2-1.
Xiddiga reer Poland Robert Lewandowski oo u ciyaara kooxda Bayern Munich ayaa u horseeday guusha kooxda isagoo dhaliyay hal gool daqiiqadii 43aad, taasoo kor u qaaday gooldhalinta ciyaaryahanka ilaa iyo 31 gool isla markaana kor u qaaday hogaaminta liiska gooldhalinta Bundesliga.
Kooxda Bayern Munich ayaa gaartay 76 dhibcood oo ku hogaamineyso toban dhibcood kooxda ku soo xigta ee Borussia Dortmund, oo kaalinta labaad ku jirta isla markaana maanta oo Arbaco ah la ciyaari doonta kooxda Mainz, sidaasi darteed Bayern ayaa loo caleemo saaray inay tahay kooxda horyaalka Bundesliga ku guuleysatay, iyada oo aan loo eegin natiijooyinka tartamada iyo natiijooyinka labada marxaladood ee ciyaareed ee haray.
Dhanka Werder Bremen, waxay ku dhowdahay inay u degto heerka labaad, maadaama dhibcaheeda ku joogsadeen 28-dhibcood oo ay ku jirto kaalinta 17-aad, waxaa ka hooseeya hal koox oo keliya.
Dhinaca kale waxaa la dhowrayaa natiijooyinka tartamada Premier league oo la filayo in Liverpool ku guuleysato iyo kan La Liga oo isku heystaan Barcelona iyo Real Madrid, sidoo kale kan Talyaaniga oo aan ka dhicin xiisahiisa kuwa kale.